पिलोको समस्या घरेलु उपायले नै ठिक पार्ने - ज्ञानविज्ञान
शरीरको कुनै हिस्साको रौं टुट्ना बाट उत्पन्न हुने, पिलो एक प्रकारको फोको हो ।
अन्यभन्दा अलिक फरक र पीडादायी हुन्छ यसको घाउ । शरीरका कुनै भागमा पिलो भएमा फोकाजस्तो देखिन्छ र त्यसमा पीप जम्न थाल्छ । यसले शरीरको कुनै पनि अंगमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । जस्तै यद्यपि, हातगोडा, पिठ्युँ, काखीमुनि र जाँघको वरिपरि यस्तो समस्या बढी हुने गर्छ ।
पिलो भएको अंगमा रातो हुने, फुल्ने, सुन्निने, ढुसी पर्ने, पीप जम्मा हुने र पीप निस्कने गर्छ । पिलो भएमा उपचारका लागि बजारमा विभिन्न औषधी र मलम किन्न पाइन्छ । जबकि, आयुर्वेदिक औषधीद्वारा यसको समस्याबाट सजिलै मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
पिलोको दुःखाई कम गर्न मेहेन्दीको प्रयोग लाभकारी हुनसक्छ । मेहेन्दीमा पाइने चिसो गुण यसका लागि फाइदाजनक हुने गर्छ ।
अझ, पिसेको मेहेन्दीलाई पिलो भएको ठाउँमा साँझबिहान बाक्लो लेप बनाएर लगाउनु पर्छ ।
Topics #घरेलु #पिलो
Don't Miss it (भिडियो) काखी सार्है गनाउछ ? यसो गर्नुहोस, यो उपाय अपनाउनुहोस कहिल्यै गनाउदैन !!
Up Next कसरी मिठो निद्रा लिने ?